साहित्य | सीमान्त . marginal साहित्य – सीमान्त . marginal
''साहित्य शब्दहरू सम्मिलित ललित कला हो'' - जगदीश वाग्लेको साहित्य
कथा – कबिता-मुक्तक – संस्मरणहरु
”मेरो प्रश्न थियो कि -म यौटा पुरुष साथिसँग घण्टौं सगै बसें भने कुनै कुराको महशुस हुन्न तर यौटी केटी साथीसँग एक्लै हुंदैछु भने शरिरमा एक प्रकारको डर, कम्पन र तरलताको प्रवाह हुन थाल्छ । यस्तो किन हुन्छ ?’’ पुरा पढनुहोस…
‘मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो मुलुक असल नेतृत्वको खोजीमा छ र राज्यले खोजिरहेको असल नेतृत्व म जस्ता विधवाको गर्भमा थिचिएको छ। सायद समाजका नाइकेहरु असल नेतृत्वको जन्ममा आफ्नो अस्तित्व नासिने डरले त्यसरी सृष्टि थिच्न मन पराउँदा हुन्।” पुरा पढनुहोस…
“धरतीमा मैले गरेका कूकर्मको लागि दश वर्ष नर्कमा बिताउनु पर्दोरहेछ। त्यसपछि स्वर्ग छिर्ने मेरो बाटो क्लियर हुनेछ। त्यस पछिको पाँच वर्ष मैले स्वर्गमा परीक्षण भीसामा रहनु पर्छ। अनि बल्ल, मलाई स्वर्गको ग्रीन कार्ड प्राप्त हुने छ।” पुरा पढनुहोस
“म यसलाई प्राधिक सभ्यता भन्न रुचाउँछु। प्राधिविक सभ्यता यस मानेमा कि एक घण्टा मात्रै बिजुली र इण्टरनेट उपल्ब्ध नहुने हो भने जीवन अस्त ब्यस्त हुन्छ। वर्तमान समाजले मानविय कल्याणको वरिपरी रहेर बिकास गर्न सकिने सभ्यताका बारेमा त्यती सोचेको छैन। मलाई लाग्छ; जुन संभव थियो र रहिरहनेछ।” पुरा पढनुहोस…
“बिहानको ९ जती बजेको रहेछ । का का, कागको जिरिक्क लाग्ने स्वर संगै ब्युझेँ । झ्याल अगाडि अर्को घरको छानामा बसेर काग मच्ची मच्ची मै तिर फर्केर कराइ रहेको रहेछ । मलाई भने पत्याउन गाह्रो भईरहेको थियो कि- यी सबै अन्धविश्वास हुन कि यथार्थ संकेत !” पुरा पढनुहोस…
“यतिकैमा आकर्शक जाइण्ट शरीर भएकी गोरी तर तल देखी माथिसम्म पुरै कालो पहिरनमा सजिएकी महिलाले मै तिर हेरीरहेको देखेँ; आँखाहरु जुधे । तर उनका आँखाहरु भने बिजुली चम्किंदा झैँ हत्त न पत्त आफ्नै कालो पहिरनमा ठोक्किन पुगे । ट्रेन आयो, भित्र पसियो” पुरा पढनुहोस
वहाँको डिल्लिबजारको घरमा ”यो कविता हुन्छ की हुँदैन भनेर?” देखाउने सुअवसर पाएको थिएँ । वहाँले दुइ-चार श्लोक हेरर भन्नुभएकोथियो – ”लेख्नेको रुचिको कविता हुन्छ सबैलाई सोधेर चित्त बुझाएर कविता लेखिदैन, एक बिषय लिएर तपाँइलाई मनपरेको लेख्दै जानोस पूरा भए पछि त्यहि कविता…
Read more कबिता-मुक्तक
Read more कथा
जीवन र मृत्यु के हो, यसको प्रयोग कसरि गर्नु पर्छ, र यसलाई कसरि बुझेर के कस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने जस्ता जीवन र मृत्यु संग संबन्धित दर्शन बिचारहरु
Read more जीवन-दर्शन
Read more यात्रा-संस्मरण